Umenzi wefrimu yeglasi yokuKhusela iMfihlo eyimfihlo yabucala, uMvelisi oPheleleyo weFektri kunye neFektri | Keja
Ukhuseleko lweglasi yesikrini sokukhusela ifilimu yeGlasi, ukuGubungela okupheleleyo
Ubumfihlo bokwenyani, vimba amehlo angabonakaliyo kumacala, isikrini sibonakala ebantwini ngqo phambi kwesikrini. Ifilimu yeGlass enomsindo, Buyisela i-HD, ukuFunda okuPheleleyo, yonke ifowuni ephathekayo okanye iphedi / ithebhulethi yeApple, iSamsung, iHuawei, iXiaomi yonke isikhuseli esingu-2.5D okanye umkhuseli we-3D
Inkqubo Pukukhuselwa kobuhlanga
Izinto eziphathekayo Glass
AB Iglu Imvelaphi yaseJapan / Korea, ukukhawuleza ngokukhawuleza
Piimpawu zobuhlanga 28° okanye 32°, 2way okanye 4way.
Ubukhulu obupheleleyo 0.58mm( iglasi); iyahluka nezinye iintlobo.
Ukubekwa elubala 92%
Uhlobo olusetyenzisiweyo I-2.5D, i-3D, i-hotbending, umbala omnyama wokuprinta, iglasi ecacileyo, iPET
Iglasi egcweleyo yokugubungela, ukhuselo olungaphezulu kwesikrini, gubungela ukhuselo olupheleleyo, ukhuseleko ukuya emaphethelweni, uKhuselo lwaBucala loKhuseleko lwe-Spy-Spy, inokukhusela ngokufanelekileyo ulwazi lwakho lwescreen malunga nemfihlo yorhwebo kunye nemfihlo yabucala ukusuka ngasekhohlo, ekunene, phezulu nasezantsi macala omane . Iglu ye-ABS ephuculweyo yenza ukuba iglasi enomsindo ilingane isikrini ngokugqibeleleyo ngaphandle kwamaqamza.
1. Ubumfihlo bokwenyani --- uMkhuseli wabucala uMkhuseli uvimba amehlo angabonakaliyo kumacala. Isikrini sibonakala ebantwini ngqo phambi kwesikrini. Gcina ulwazi lwakho oluyimfihlo nolubuthathaka lufihlakele kubantu ongabaziyo. Ogqibeleleyo ilifti, metro okanye ezinye izihlandlo zoluntu.
2. Iinguqulelo ezahlukeneyo: I-angle yabucala inokukhetha i-28° okanye 32°, 2way okanye 4way ngasese, zonke iintlobo zomkhuseli kubandakanya iglasi, i-PET, I-2.5D, i-3D, i-hotbending, umbala omnyama wokuprinta okanye icace gca. Iinguqulelo ezaneleyo, ukuze zilungele iimfuno zakho zomgangatho owahlukileyo.
3. Umda we-Edge to Edge -Uyilo ngokukodwa lokugubungela yonke isikrini, Nikezela ngokugubungela ngokupheleleyo, emaphethelweni ukuya kukhuseleko lomda ukufunxa phantse nayiphi na impembelelo. Sebenza kwiimeko ezininzi.
4. ICrystal Clear -Yenziwe ngeglasi yokuthambisa yokucaca okuphezulu, iglasi yethu enobushushu bucace ngakumbi kunabanye. Ayisebenzi’t mnyama mnyama kakhulu isikrini, kwaye awuyenzi’Kufuneka ubonakalise ukukhanya ngexesha lomsebenzi wemihla ngemihla.
5.Ihlala ixesha elide-Yenziwe ngeglasi enobunzima be-9H, khusela isikrini sakho kwimikrwelo, ukukrwela kunye nefuthe kwithontsi elincinci. Yogqunywe nge-hydrophobic kunye ne-oleophobic layer, iyanciphisa intsalela yokubila kunye neminwe yeminwe, ukugcina isikrini sakho sihlambulukile imini yonke.
Egqithileyo Isikhuselo seglasi esikhuselayo
Okulandelayo: I-1.2.5D yeelensi / umkhuseli wekhamera
UMkhuseli weFilm yesikrini
UMkhuseli weFilimu weTpu